Magewell ေူပာင်းလဲရေး AV-over-IP ကိုမှတောင်မှပိုမိုသက်သာနယူးNDI®ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ & Models နှင့်အတူကို - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Magewell တောင်မှပိုမိုသက်သာနယူးNDI®ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ & Models နှင့်အတူ AV စနစ်-over-IP ကိုမှေူပာင်းလဲရေးကို
Pro ကို converter HDMI တက္ကဆပ်နဲ့ Pro ကို converter SDI TX NDI သို့ entry ကို၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ®အိုင်ပီ Workflows နဲ့ပါတ်သက်; ထို့အပြင် InfoComm မှာလိုလားသူ AV စနစ်ပွဲဦးထွက်စေ Pro ကို converter AIO RX ဒီကုဒ်ဒါ
မေလ 13, 2019 - နန်ကျင်း, တရုတ်: အိုင်ပီ-based ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့် AV စနစ် Workflows ဖို့အကူးအပြောင်းသည် ပို. ပင်တတ်နိုင်ပါစေကူညီပေးနေ, Magewell ယင်း၏သစ်ကိုမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် Pro ကို converter HDMI TX နှင့် Pro ကို converter SDI TX ဆက်ကပ်အပ်နှံ NDI® ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ။ ကုမ္ပဏီ၏စွယ်စုံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်ပို့ Pro ကို converter Plus အား ်, encoding ကသာ configurations အတွက်မော်ဒယ်သစ် TX မော်ဒယ်များ InfoComm 2407 မှာ Magewell ရဲ့တဲ (နံပါတ် 2019) တွင်မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်။
Magewell ရဲ့ဆုရ Pro ကို converter ဟာ့ဒ်ဝဲ converters အဖြစ်၏မိသားစုသည်အသုံးပြုသူများဖွများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းဆောင်ကြဉ်း HDMI သို့မဟုတ် SDI ဗီဒီယိုကအချက်ပြမှုများသို့နှင့် AV စနစ်-over-IP ကို ​​အသုံးပြု. workflows ထဲက NewTek'' s ကိုလူကြိုက်များ NDI နည်းပညာ။ အဓိကလုပ်ငန်းနေစဉ် Pro ကို converter Plus အား မော်ဒယ် signal ကိုကွင်းဆက်-မှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်သည်နှင့်ပြင်သာပြောင်းသာ encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါသည် Modes အကြား switched နိုင်ပါတယ်, Pro ကို TX ပြောင်း configurations NDI စီးအရည်အသွေးမြင့်သို့ baseband သတင်းရင်းမြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့တစ်ခုသာအနိမ့်အောင်းနေချိန် NDI အန်ကုဒ်လိုအပ်နေဖောက်သည်များအတွက်အနိမ့်တန်ဖိုးနည်း entry ကိုအမှတ်ပေးပါတယ်။
Pro ကို TX ပြောင်း devices များနေဆဲ Pro ကို Ethernet ကျော်ပါဝါ (poe) ထောက်ခံမှုအပါအဝင်မိသားစုရဲ့လူကြိုက်များတန်ဖိုးကို-added features တွေပြောင်းပါဝင်သည်; အစီအစဉ်နှင့် preview ကိုတာလီချိုးအလင်းအိမ်; NDI-based PTZ ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်; နှင့်ကင်မရာအတွက်စံ 1 /4"-20 ချည် mounting ။ အလိုအလျောက် input ကို format ကိုထောက်လှမ်းနှင့်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုအလိုလိုသိ browser ကို-based interface ကို status ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော FPGA-based ကိုဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ်အဆင့်မြင့်ပြောင်းလဲခြင်း settings ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်စဉ်အသုံးပြုမှု plug-in များနှင့်-ကစားလွယ်ကူခြင်းကို enable ။ အဆိုပါ Pro ကို converter HDMI TX ၎င်း၏မှတဆင့် 2048 × 1200 မှသွင်းအားစုတက်ထောက်ခံပါသည် HDMI 1.4 interface ကို, အစဉ် Pro ကို converter SDI TX 1080G-SDI ကျော် 60p3 မှတက်သတင်းရင်းမြစ်ကိုင်တွယ်။
ဤအနောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်, Magewell ရဲ့နဲ့အတူ Pro ကို converter လေး: ထုတ်ကုန်လိုင်းကိုယခုခုနစ်ခုမော်ဒယ်များပါဝင်သည် Pro ကို converter Plus အား အန်ကုဒ် / ဒီကုဒ်ဒါ (4K နှင့် HD SDI သို့မဟုတ်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူမော်ဒယ်များ HDMI သွင်းအားစု); နှစ် Pro ကို TX ပြောင်း ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ; နှင့်မကြာသေးမီက-ထုတ်ဖော်ပြသ Pro ကို converter AIO RX NDI ဒီကုဒ်ဒါ။ အဆိုပါ, InfoComm မှာ၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်ပြပွဲပွဲဦးထွက်အောင် Pro ကို converter AIO RX တိုက်ရိုက်လွှ NDI converting အားဖြင့် IP ကိုကွင်းဆက်ကျော် AV စနစ်က high-quality SDI သို့စီးပြီးဆုံးသို့မဟုတ် HDMI ထိုကဲ့သို့သောမော်နီတာနှင့် projector ကိုအဖြစ် baseband ပစ္စည်းများမှချိတ်ဆက်မှုအတွက်အကျိုးရလဒ်များ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုတိုးမြှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, အကြီးစားဗီဒီယိုကိုနံရံများနှင့်ပုံရိပ်ကိုချဲ့အဖြစ်တင်ဆက်မှုပလီကေးရှင်း NDI ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းသစ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏အစွမ်းထက်နှင့်ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များ Pro ကို converter Plus အား ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်လူကြိုက်များစေပြီ, ဒါပေမယ့်အများကြီးဖောက်သည် signal ကိုကွင်းဆက်-မှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်သလိုတဦးတည်း box ထဲမှာ switchable encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါစွမ်းရည်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မလိုအပ်ပါဘူး, "မေီ Zhou, Magewell မှာအရောင်းဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ဒီ Pro ကို TX ပြောင်း မော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်အရင်ကထက်ပိုပြီးဖောက်သည် NDI ဖြေရှင်းချက်များကြီးထွားလာဂေဟစနစ်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်စေမယ့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာတူညီတဲ့အဓိက encoding ကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမပူဇော်ကြကုန်အံ့။ "
InfoComm 2019 Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက်ဇွန်လ 12-14 ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။
သုံးနယူး Software များ Tools များနှင့်အတူ Magewell Enhancer ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်း - မေလ 29, 2019
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပြောင်းလဲမှု ပွောငျး converter အန်ကုဒ် ဟာ့ဒ်ဝဲ HDMI ip + LIVE Magewell NDI Network ကို NewTek ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ် SDI SoftAtHome, MStar, CES2017 Software များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-13
ယခင်: Cine ဂီယာ 2019 မှာ Aaton-ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ဆုရအသံဖမ်းကြည့်ရှုပါ
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့် EDIUS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့အတူ Ultimate Editing Functions ဘဝမှကယျတငျ